Umatshini we-Arc Welding, iMig Welder ephathekayo, uMatshini we-Mma Welding-u-Andeli
● I-5.5KG ngokupheleleyo, icwecwe kwaye iyaphatheka, kulula kwaye kulula ukuyisebenzisa
● qala i-arc ngokulula, i-arc ezinzileyo ye-welding, i-pool ye-weld welding kunye ne-welding shape
● Ukutshisa i-arc yangoku kulungelelaniswa okunokuphucula kakhulu umsebenzi wokuqala i-arc
Umgangatho wemveliso sisihloko sikanaphakade, kodwa ikwayiyo into ebalulekileyo kumashishini asekwe kwintengiso.
Icandelo litsiba ekujolise kuko kubumbano lwamazwe aphesheya, iya kuba ngumgangatho weemveliso ukusukela kumhla wokusekwa kobu bomi bumanyano kakhulu ukukhokela umsebenzi.
I-MZ-1250 Inverter DC auto efakwe kwi-arc welding ...
I-IGBT IMODYULI TYPE ● imultifu ...
I-MZ-1000 ye-Inverter DC yokuntywila emanzini kwe-ARC ...
Intshayelelo IGBT MODULE ...
I-MIG-250Y Inverter i-CO2 igesi yokugungxula umatshini
I-MIG-250F Inverter ye-CO2 yomatshini wokuhambisa iwelding wegesi
CUT-120 Inverter DC yokusika iplasma yomoya
Intshayelelo IGBT TYPE ● ...
I-MIG-200 Inverter i-CO2 igesi yokugcwala ngomatshini
I-Andeli Group Co, Ltd, eyasekwa ngonyaka ka-1985, ikwisona sixhobo sikhulu sokwenza izixhobo zombane ezisezantsi e-Liushi China, ebizwa ngokuba yi "Metropolis yeChina." I-Andeli Group Co, Ltd liqela elikhokelayo kukungeniswa kombane, ngemveliso, uphando lwezenzululwazi, ezothutho, ukungenisa kunye nokuthumela ngaphandle urhwebo, utyalo-mali. Siliqela elikhulu elingenamda wengingqi, kwimizi-mveliso e-China. U-Andeli ungumnini weenkampani ezibambe izabelo ezili-12 e-Shanghai, Hunan, Zhejiang, UAE kunye neenkampani ezingaphezulu kwama-300 ezisebenzisanayo. UAndeli unabasebenzi abangaphezu kwama-3000 abanempahla iyonke ye-USD150,000,000 kwii-235,000 square metres. Uphawu lwentengiso oluthi "ANDELI" luchongwe njengenye yeempawu zorhwebo ezaziwayo eTshayina.U-Andeli ngokubhekisele kumgangatho weemveliso njengobomi …… ..
Izinto ezili-10 ekufuneka ziqwalaselwe xa ukhetha umatshini wokusika iplasma
NgoNovemba / 19/2020
Umatshini wokusika wePlasma yenye yeendlela ezilungileyo zokusika intsimbi, intsimbi engenasici, ubhedu kunye nealuminium. Unokusika isinyithi ngokukhawuleza nangokuchanekileyo kuba iyatshisa ngesinyithi seplasma. Xa ukhetha umatshini wokusika weplasma olungileyo, sibhale isikhokelo kwizinto ezili-10. Ukuba unomdla kwi-b ...
I-127th Canton Fair kwi-Intanethi, i-ANDELI yima inombolo: 11.3, B28-29 C10-11
NgoJuni / 13/2020
Iqela leAndeli liza kuthatha inxaxheba kwi-Intanethi yeCanton Fair kwiintsuku ezimbini kamva. Le Fair Canton ekwi-Intanethi iya kubanjwa ukusukela nge-15 ukuya kwi-24 kaJuni, 2020. Oogxa bezentengiso kwisebe leshishini lwaphesheya kolwandle, baya kubanjwa kusasazo olungaphazanyiswayo kwi-Intanethi ukusukela nge-9 kusasa. ukuya ku-9 ngokuhlwa. Beijing ...
U-ANDELI Uyaphumelela kwi-117th Canton Fair
U-ANDELI kwakhona uqokelela ukugxila kwi-117th Canton Fair ukusukela ngomhla we-15 ku-Epreli 2015 ukuya kumhla we-19 ku-Epreli 2015. Ngexesha lomboniso, u-ANDELI ubonakalisa uthotho lweemveliso ezisandula ukwenziwa ezinconywe ngokubanzi ngabathengi bamanye amazwe. Kunye neemveliso zayo ezahlukeneyo, ubugcisa, q eliphezulu ...